Home Wararka Kenya oo shaacisay inay howlgal ku dishay 15 ka tirsanaa Al-Shabaab
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howl-gal qorsheysan oo ciidamada Kenya ay ka fuliyeen deegaano dhow dhanka xadka Somalia kuwaas oo lagu beegsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab oo weerar culus ka fuliyey halkaasi.
Saraakiil u hadashay Booliska Kenya ayaa shaaca ka qaaday in howl-galkaasi lagu dilay ugu yaraan illaa 15 xubnood oo looga shakiyey inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, kadib markii ay ciidamadu weerar ku qaadeen halka loo yanaano Bodhei oo ka tirsan kaynta Boni.
Booliska ayaa sidoo kale xusay in ciidamadu ay maalmihii u dmabeeyey ku raadjoogeen xubnahaasi oo lagu eedeeyey inay geyteen weerar lagu dilay illaa 6 qof oo ka dhacay gobolka Xeebta ee Laamu.
Sidoo kale waxay saraakiishu intaasi ku dareen inay sii wadi doonaan howl-gallada ka dhanka ah Al-Shabaab, si looga hortago weerarada ay kooxda ka geysato Waqooyi Bari.
Dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay Al-Shabaab, kuna aadan howl-galkaas ay Kenya shaacisay inay uga dishay xubnahaasi.
Xaaladda ammaan ee gobolka Waqooyi Bari ayaa beryihii dambe aheyd mid aad u liidata, waxaana ka dhacay weeraro qorsheysan oo lagu dilay dhowr qof.
Si kastaba, kooxda Al-Shabaab ayaa tan markii la galay sanadkan cusub ee 2022 kordhisay weerarada ay ka fuliso gudaha Kenya, gaar ahana deegaanada u dhow xadka Somalia.
Previous articleGuddiga qabashada doorashada guddoomiyaha cusub ee Guddiga Xalinta Khilaafaadka doorashooyinka oo la magacaabay
Next articleThe British parliament is expected to debate a motion entitled “recognition of Somaliland”
Maxa ka soo baxay kulankii Ganacsatada beesha Ceyr & Rooble/Qoor Qoor?...
Maxaa ka jira in 14-jir lagu kufsaday Nairobi ka dibna la...